Layaab Iyo Naxdin :- Muqaal dhab ah nin ka shageeynayo gabar uu horey ugu soo galmooday Taas saaxiib lah Kan logu sheegaynay + Maxaa dhacay ? | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Layaab Iyo Naxdin :- Muqaal dhab ah nin ka shageeynayo gabar uu horey ugu soo galmooday Taas saaxiib lah Kan logu sheegaynay + Maxaa dhacay ?
Layaab Iyo Naxdin :- Muqaal dhab ah nin ka shageeynayo gabar uu horey ugu soo galmooday Taas saaxiib lah Kan logu sheegaynay + Maxaa dhacay ?
Bulsha:- Mid kamid ah dhalin yarada ku nool dalka Kenya gaar ahaan magalada Nayroobi ayaa la kuamay dhacdo layaab leh taas oo ah mid amakaag iyo naxdin iskugu jirta kadib markii ninkaas oo lagu magaacaabo Rivanto oo ah nin inta badan can ka ah
xaafadaas ahna sheekaaloow dhnka labiska intabadan saxo ayaa mid inta badan aay ka helaan gabdhaha kuwaas uu had iyo goor u shageeyo.
Sheekadaan ayaa mid layaab ah hadaad daawado waana Rivanto ka waramayo
hablood u horey ugu soo galmooday kuwaas u mid walba sii raaxo leh ku soo baasheeyay , waana shaqsi wax ka yaqaan galmada .
Hadaba mid kamid ah maalamaha dunida isbuuca ayaa saaxiibkiisa dinola aay iskugu yimaadeen sheego dhanka gabdha ah dumarka iyo dareenkooda waxaana dhacday kadib markii usoo hadal qaaday radhigaa oo ah gabdhaha u ugu jeclaa dhanka galmada uu aad ugu soo galmooday jiifka iyo istaag ba
Hadaba maxaa dhacay marka la soo hadal qaaday Dawasho wacan